Ukuqashwa kwemisebenzi eDubai thola futhi kukalwe amasayithi okuqashwa
Ukuqashwa kwemisebenzi e-Dubai Ubani ozoqasha? ⭐⭐⭐⭐⭐
Umhlahlandlela ophelele wokuthuthela e-Dubai ⭐⭐⭐⭐⭐
I-Dubayi Imisebenzi Yokuqasha & Umsebenzi ku-Dubai ⭐⭐⭐⭐⭐
Ukuqashwa kwemisebenzi e-Dubai
Ukuqasha Imisebenzi. Ulwazi oluningiliziwe lwezisebenzi zokuqashwa. Futhi ngubani esizobanjelwa e-Dubai ?.
Ukufuna imisebenzi e-Dubai. Ngokuqinisekile, i-Dubai City Company ukusiza abafuna umsebenzi. Ngenhloso ye imisebenzi yokugqugquzela e-Dubai. Manje sinikeza uhlu lwabaqashi base Dubai. Ngethemba lokuthi wonke amakhasimende ethu athola umsebenzi. Sisebenza ngokuqondile ne-ejensi yokuqasha e-Dubai City. Ukuphuma okuvela eNdiya ngokuhlangana kahle kwamakhono kungalindela ukunikezwa kwemali ekhangayo.
Ukuze uthole inkampani enhle yokuqashelwa e Dubai. Udinga ukuqala ukufuna umsebenzi ophezulu Amadokhumenti e-Dubai. Futhi uxhumane nabaphathi be-HR. Hlola it up ngubani oqashwe e-UAE. Ngaphezu kwalokho, silindele ezinye izithuba zeminyaka ezayo. Fresh kusuka Imisebenzi yethu e Dubai Ukukhangiswa kwebhulogi. Inkampani yaseDaily City nayo ukusebenza eduze nabaqashi base-Abu Dhabi. Ikakhulukazi emva kokuqaliswa okusha kwe-VAT. Futhi sisebenza ngokwemithetho yokuqasha e-Dubai Area.
Eqinisweni: Inkampani yeDaily City Ukuqasha ochwepheshe basePakistan. Ukukhomba ukuthi sisebenzela i-WhatsApp. Uma ufunde kakhulu ngamakhono ochwepheshe. Isibonelo isibonelo samakhono amanga njengokuthengisa nokuthengisa. Ungakwazi nakanjani thola imisebenzi e Dubai noma e-Abu Dhabi.
Siphinde sisize abasebenzi bebhange nabasebenzi bezokwelapha kule UAE. Nathi futhi ukusiza i-Google Career e-media city. Izinkampani zase Dubai kuhle ukusebenzela khona. Ngaphezu kwalokho, sizokwazi ukwandisa imisebenzi okunikezwayo Amabhizinisi abezindaba zase Dubai ngo-50% kuze kube yi-2018. Okubaluleke kakhulu enhlanganweni yethu ukusebenzisa amaphrojekthi amakhulu, kufaka phakathi indawo entsha yokusesha umsebenzi wase-Dubayi yokuthola uhlelo olusha lokuqasha amaPhilippines. Ngalokhu engqondweni, sidale uhlu oluphelele lwabaqashi base Dubai.
Ngubani ozoqashwa ku-UAE?
Phakathi kwalezo zindawo zokufuna umsebenzi waseDaibou. Kuningi labaqashi abaphezulu. Futhi bayazi ukuthi lokho kuzodingeka abafuna umsebenzi e-UAE. an ejensi yokuqashwa e-Dubai. Cishe njalo ifuna ochwepheshe nabaphathi abakhulu. Ukuze uwafinyelele udinga ukulayisha i-CV yakho. Ungasayiphathi abaphathi abaphezulu abaphathi base Dubai. Abaqashi base-UAE bazohlinzeka ngisho nangaphezulu izikhundla zokufuna imisebenzi esanda kuqeda iziqu ezine-MBA. Ngenxa yalesi sizathu abafakizicelo abanesicelo esiphezulu somsebenzi e-Dubai. Ngokushesha kungenziwa kuthathwe umsebenzi. Futhi Yebo, kunikeziwe umsebenzi okhokhelwa kahle.
Ngakolunye uhlangothi, ubani ongalindela ukukhokha okukhangayo ?. Abaphathi abaphezulu kanye Abasebenzi bebhange bangaqashwa e-Dubai. Siphinde sisize abaphathi bamaketha. Lolu hlobo lomsebenzi owenza kakhulu e-UAE. Enye iphuzu elibalulekile eminye yemisebenzi ekhokhelwa kakhulu. Bangabasebenzi basehhotela. Akulula kakhulu ukuthola kepha kulinganiswe kakhulu. Siyazi ukuthi ngubani ukuqasha imisebenzi e-Dubai ku-2018 nase-2019.
Ngalokhu engqondweni, inkampani yethu yadala. Isistimu entsha kusuka Dubai City Inkampani imisebenzi yokuqashwa. Ngaphezu kwalokho abaqashi bahlinzeka izithuba kubachwepheshe bokuqasha. Wonke ama-expat kubalulekile kuhulumeni wase-Dubai. Umthetho e-UAE kusho lezo abafuna umsebenzi baqala umholo kumele kube ngokwanele ukuhlala ezingeni elihloniphekile. Ngaphezu kwalokho ukuqasha imikhuba kumele kulandelwe kwizimboni eziyinhloko.
Izinto okumele zikwazi ngokuthola umsebenzi ofanele
Eminyakeni ezayo, ye-2018-2020. Imisebenzi ku Dubai izophakama ngenhla. Futhi amabhizinisi e-Whatsapp Group azokwenza qhubekela phambili ebhizinisini. Empeleni imisebenzi yezindawo zeDaily thola okuningi okuningi for hunter umsebenzi e-United Arab Emirates. Isibonelo isibonelo abaphathi abaphezulu e-Dubai. Uzofuna ukugcina inzuzo yokuncintisana. Ukuze uthole iphuzu evame ukungahoxiswa abafuna umsebenzi. Ngenkathi abantu ukulungiselela izinselele. Abaqashi kanye nomsebenzi osebenza ibhizinisi elingaphezulu. Njengamathuba amawebhusayithi wokusebenza e-UAE azobe esezingeni eliphezulu nakakhulu. Kodwa kufanele kukhunjulwe ukuthi e Dubai kunezinto eziningi. Ukuthola umsebenzi e-Dubai. Ukuba lilingana nokubaluleka koku ukuthola umqashi oqondile.
Ubani oqashwa imisebenzi e Dubai?
Ngakolunye uhlangothi, Abadlali abaphezulu manje futhi kufanele ubheke nezinkampani zokuqasha kuqala. Iyokuqala I-Careerjet e-Dubai yokusesha inkampani futhi Inkampani yokuqasha i-Monster Gulf eNdiya Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho. Futhi ukudala i-akhawunti kukhona mahhala ngaphandle kwenkokhelo.
Abaqashi Abakhulu E-UAE ukuze bazinikele
Uhlu lwe I-TOP Recruitment Agencies ezoba ukuqasha imisebenzi e-Dubai:
I-Bayt - Isilinganiso: 4.97
Umsebenzi Wokujikeleza - Isilinganiso: 4.67
Dubai City Inkampani 4.59
I-Middle East BAC - Isilinganiso: 4.57
Hill McGlynn Dubai- Isilinganiso: 4.84
Ukusebenzisana kwamaCharterhouse UAE- Isilinganiso: 4.25
I-Clarendon Parker (Ephakathi-Ephakathi) - Isilinganiso: 4.00
I-ACR World International Search- Isilinganiso: 3.97
Jerry Varghese Imisebenzi Yomhlaba Wonke 3.95
IQ Ukukhetha - Isilinganiso: 3.90
I-Executive Solutions UAE - Isilinganiso: 3.66
SineWave HR Consultancy - Isilinganiso: 3.52
I-Edge Executive Business Consultancy I-FZE - Isilinganiso: 3.44
I-Gulf Connexions - Isilinganiso: 3.44
Izinsiza ze-Bin Eid - Isilinganiso: 3.39
Domino Ukuqashwa kokufundisa & Consultancy - Isilinganiso: 3.37
Options Group International (UAE) - Isilinganiso: 3.33
I-SOS yokuqasha abaqashi - Isilinganiso: 3.20
Imisebenzi Ephakathi Ephakathi - Isilinganiso: 3.15
Kershaw Leonard- Isilinganiso: 3.10
I-JobTrack - Isilinganiso: 3.05
I-Middle East ye-Nadia - Isilinganiso: 3.00
Reed.co.uk Isilinganiselwa: 3.00
Izikhundla ezihamba kahle yimisebenzi yezezimali?
Isingeniso kuwe imisebenzi emisha edolobheni lase-Dubai media. Kule ndawo, uzothola izikhundla eziningi zezezimali. The izinkampani ezinhle kakhulu e-UAE ube namahhovisi lapho. ANd ukuqhubekela phambili nge owesifazane udlulisela ukuguqulwa kweDaily ibe yi-Smart City. Ngalesi sizathu, silungiselela lokhu okuthunyelwe. Ukuze kusetshenziswe okusha Dubai portal umsebenzis. Siqoqa imininingwane ethile. Ngokumangazayo kushiwo ekuqaleni kwalo nyaka e-UAE. I-Emirates abaqashi abaphathi abakhulu be-Expo. Hamba ngezindawo ze-55,000 zemisebenzi entsha yezimali nezezimali izikhundla e-Gulf. Ukuzimisela ukuvula ubufakazi obuqine kakhulu bokuthi eMpumalanga Ephakathi. Iba isikhungo sebhizinisi ngaphakathi kwesifunda se-GCC.
Ngomphumela we ukuphakamisa ukuqwashisa ngemisebenzi yokuphatha. Ikhamphani yedolobha laseDaily ibhekene nokubikezelwa kwezinkokhelo zezimali ngezansi. Ngazo zonke izindlela, ungabheka ukuthi ungayithola kangakanani. Ekuhlaziyweni kokugcina, uma ungenzi okwanele. Kumele qala ukufuna isithuba esisha. Ehlangothini elihle lenkampani yethu eqinile. Uzothola lula kakhulu. Enye iphuzu eliyinhloko ukuthi singakwazi push isicelo sakho somsebenzi e Dubai. Ukufinyelela abaphathi abaqashile ngisho nakakhulu.
Ngokuhamba kwesikhathi, izikhundla eziphezulu ezikhokhelwa kahle zezimali ze-3 zemisebenzi / ezibikezelwe (Nasdaq Dubai) amaholo:
Abaqondisi ngezezimali izinkampani zokuhlela nokuhlaziya e-Dubai City (enkulu): $ 144,300 - $ 251,700
Abaphathi abakhulu beTela (inkampani yase-Dubai): $ 102,000 - $ 161,000
Abalawuli bezikweletu ezilula (inkampani encane): $ 62,200 - $ 78,500
Ukuqashwa kwemisebenzi e-Dubai Best Job portals e-UAE
Empeleni omunye wemisebenzi engcono kakhulu yomsebenzi we-Dubai. Isisekelo edolobheni lezokuxhumana lase Dubai. Ngaphezu kwalokho kungukuthi bazi kahle njengeBayt. Futhi enye i-Careerjet.ae. Kodwa kunolwazi oluthe xaxa ku-Dubai Blog yethu. Mayelana nani uhlobo lomsebenzi odinga ukuba nomholo omuhle. Futhi, ungabheka ngezansi. Nje ukuqoqa ulwazi oluthe xaxa mayelana nokusesha umsebenzi ku-UAE. Kubalulekile ukuqaphela ngaphambi kokuba uqale ukufaka isicelo e-Dubai. Udinga ukwazi amakhono akho nesipiliyoni sakho. Futhi, qiniseka ukuthi awuzitholi phansi. Kwalokhu isizathu, ekufuneni kwakho emsebenzini, udinga ukwazi ukuthi kungani uthuthela e-UAE.
Udinga ukwazi ukuthi ungathumela kuphi kabusha kwakho. Futhi empeleni indlela yokusebenzisa Dubai imisebenzi yokusesha amasayithi ukuze kukhuliswe imiphumela yokusesha umsebenzi. Imisebenzi e-Dubai ayikho intela engenayo. Kodwa ukuthi wonke umuntu uyazi kahle? Ngenxa yombono wakho. Sesha for Career Career e Dubai iwebhusayithi. Bese uthole lowo oyithandayo. Yiqiniso, iwebhusayithi engcono kakhulu yebhizinisi yiyona enkulu kunazo zonke.
URobert Half - I-Agency Recruitment
Kwiwebhusayithi yeRobert Half, ungathola izikhala eziningi. Ngokunaka imininingwane, inkampani inikeza ukufuna usizo. Ikakhulukazi izinkulungwane aUhlu lwezemisebenzi zomhlaba jikelele lwe-utomotive. Kubalulekile ukuqaphela uRobert Half inkampani. Ukusebenza eduze kakhulu izinkampani eziphezulu e-UK kanye ne-UAE. Ukubeka abaphathi emhlabeni jikelele. Kulesi simo, amathuba amaningi e-United Arab Emirates. Ngalokhu kuqinisekiswe ukuvakashelwa abafuna umsebenzi omusha.
Ngesikhathi esifanayo, le nkampani yokuqasha inikeza. Yikho kodwa izinsizakalo ezikhethekile zabaphathi abaphezulu kwiwebhusayithi kaRobert Half. Ehlangothini olungalungile, inkampani inezinkampani zokuqasha. Ngeshwa, Okunye okunikezwa umsebenzi akutholakali kwenye indawo. Ngakho udinga ukuwavakashela kaningi. I-firm ihlonishwa ngokuthula ku-intanethi. Njengendawo yokucinga umsebenzi yomsebenzi e-Dubai. U-Robert Half naye unikeze usesho lomsebenzi siqu. Futhi iseluleko somsebenzi kwi-blog eMpumalanga Ephakathi. Ukuze a umsebenzi womhlaba kumazwe we-GCC.
URobert Half - I-Agency Recruitment kusukela 1948. Ukusiza abafuna umsebenzi thola amathuba amakhulu emisebenzi. Bavumele bathole umsebenzi omuhle ngekusasa lakho. Manje Ukuqashwa kwemisebenzi e-Dubai.
I-CareerBuilder - I-Job Job Portal
Ngenxa yalokho, i-CareerBuilder iyinhlangano ephezulu. Ngaphezu kwalokho yiyona umsebenzi wokungena emsebenzini omkhulu e-UAE. Ngaphezu kwakho konke okusemthethweni webhizinisi lokusesha umsebenzi e-US !. Zonke izinto ezicatshangwa nalo mkhiqizo. Ikakhulu uma ucinga imisebenzi e-Emirates. Ngaphansi kwalezo zimo le nkampani. Kuzophelela imisebenzi yendawo yokuthunyelwa kwamanye amazwe aseNdiya nasePakistan. Njengoba kunikezwe la maphuzu, i-CareerBuilder ingenye yamabhodi amaningi okuqashwa. Futhi ungakwazi ukuphatha ucwaningo lomsebenzi emhlabeni jikelele.
Ngokuvamile, le nhlangano emangalisayo. Ukuphatha umsebenzi wokusesha okuvumela ukuthi uhlunge izikhundla. Isibonelo ngesilinganiso sokukhetha. Ungafaka indawo ye-UAE. Ungakwazi ngisho ukucinga izikhundla ezintsha. Ngaphandle kwezinga, ungakwazi ukuwasebenzisa ukuthola umsebenzi jikelele. Ukuze ugcine leyo nkampani ingene. Sesha uhla lomholo oluhle futhi ubekwe umsebenzi wamazwe ngamazwe. Ngomakhi womsebenzi, ungathola i-CV yakho. Kwabaphathi abayikho Ukuqashwa kwemisebenzi e-Dubai.
Impela - I-NO1 Job Search Engine
Uma nje ufuna noma yimuphi umsebenzi e-Dubai. Ngempela uzokunika usizo. Futhi sifuna enye Dubai imisebenzi portals. Akunangqondo uma ufika Ngempela. Ngoba uma ubheka Ngempela.com. Uzobona ngokushesha ukuthi unayo yonke imisebenzi. Ngaphezu kwalokho, yizona ezihamba phambili. Futhi wazi kahle inkampani ngokulandela i-SEO yokuthumela imisebenzi ehlinzekwa kuyo yonke inthanethi. Le nkampani ayitholanga kuphela e-US noma eMpumalanga Ephakathi. Ungathola la mahhovisi ezinkampani ngisho nase-Ireland. Ngempela ukuqasha imisebenzi e-Dubai, nakanjani.
Enye iphuzu eliyinhloko, le nkampani yenza uhlelo lokusebenza luhle kakhulu ukuphatha. Ngakolunye uhlangothi, le giant search engine enkulu imisebenzi. Okubizwa ngokuthi iqinisile ihlanganisa uhlu oluvela kwamanye amasayithi amaningi emisebenzi. Futhi empeleni ukubeka izindawo zokusebenzela endaweni eyodwa. Ngalokhu engqondweni, ungakwazi thola ulwazi mayelana nomsebenzi wakho. Kusuka ezinkampanini ezihlukahlukene nale injini yokusesha. Imisebenzi emisha esheshayo evela kubaqashi be-GCC. Ukukhomba ungakha iphrofayela. Lokho kukuvumela ukuba sesha endaweni noma emhlabeni wonke umsebenzi. Ukusebenza ngokweqile nakho okuncane izinkampani eDubai Idolobha.
UJobe.com - Injini Yokusesha
Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, qala umsebenzi wakho wokusesha ngeJobe.com. Ungathola futhi uthole imisebenzi e-Dubai City. Ngaphezu kwalokho, funa amathuba okuqashwa ngendlela ephakeme kakhulu. With izinkampani best ngokusebenzisa le portal umsebenzi. Ngokubheka izindawo zokusesha umsebenzi e-Dubai. Yilokho iwebhusayithi evelele yabasebenzisa ama-Indian ekuvakasheni i-visa. Inikeza izaziso zomsebenzi we-Google. Kanye nokuseshwa komsebenzi ekhasini langempela. Ungasebenzisa umakhi wokwakha kabusha noma nini lapho ufuna.
Uma uthola iphrojekthi enhle yokuya ungathumela isicelo ku-inthanethi nabo. Ehlangothini olungalungile, asisekho ukusekela okuthunyelwe kwemisebenzi eyengeziwe. Lewebhusayithi yokusesha umsebenzi ibuye ikuvumele ukuthi ulayishe i-resume yakho. Kuyafaneleka ukuzithengisa ngokwakho ukuqasha abaphathi iminyango. Futhi kulabo abaqashi baqala ukucinga iphrofayela yakho. Awudingi ukubabuza. Ngidinga umsebenzi e-Dubai. Nale portal yewebhu yomhlaba jikelele. Unenqubo ephelele.
I-TheLadders: Thola Okulandelayo Okunikezwayo Nge-$ 100K - Ukuqashwa manje!
Ngenxa yokuthi ukuthola umsebenzi e-Dubai. Yiba umsebenzi omkhulu abafuna umsebenzi. Futhi uthathe isikhathi esiningi nemali kunokuba ucabange.
bhalisa isicelo sakho somsebenzi e-Dubai nalesi sayithi. Ngemiphumela, wonke umhloli womsebenzi ugxile ekuvuleni kwemisebenzi kubasebenzi bezinga eliphezulu. Lokho kube yizicukuthwane zezobuchwepheshe ezihlose imisebenzi yokuphatha ephezulu kalula uthole umsebenzi lapho ngokufaka i-CV lapho. Inkampani yabaHoli yasungulwa ku-2003, ngaphansi kwalezi zimo, izilinganiso umsebenzi wokungena waphatha umsebenzi ophelele owenzelwe abaqashi futhi abafuna imisebenzi. ekugcineni, kuze kufike i-2017 ukusiza abaqeqeshiwe Ukuphatha ukusesha umsebenzi, IMakethe futhi ukubuyela emuva kukusiza ekuqhubeni imisebenzi yakho e Dubai.
LinkedIn - I-King Of the Networking For Dubai Imisebenzi
Njengoba kuye kwashiwo izikhathi eziningi emithonjeni yezenhlalo. Linkedin yiNkosi yezindawo zokuxhumana eziphezulu. Futhi i ithuluzi elihle kakhulu oxhumana nabo ngqo emisebenzini yehhotela e-Dubai. Ngenxa yalesi sizathu esilula.Kodwa iDaily City Company igxile kakhulu kule website yokumaketha. Linkedin umsebenzi portal ikuvumela ukuba uthole umsebenzi wamazwe ngamazwe nakwazwelonke. Linkedin yiyona yesikhulumi esingcono kakhulu Ukuqashwa kwemisebenzi e-Dubai.
Ungakwazi ngisho ukusesha lokho ngokusebenzisa uxhumano lwakho olwandisiwe kwinethiwekhi. I-LinkedIn inezinhlinzeko eziningi zemisebenzi. Kunanoma yimaphi amanye amawebhusayithi e-UAE. Noma ngisho zezindawo zeGulf. Le nkampani iqala iminyaka eminingi ngaphambi kokuthi wazi kahle ngalokho. Le nkampani ikhula iminyaka futhi iyasiza ngokwengeziwe ngaphezulu kwezingu-500 Millions abazingeli bemisebenzi.
Amakhasimende amaningi amaningi athole lokhu okungaba khona kuwebhusayithi yezokuxhumana. Ngu qala ukufuna izithuba zemisebenzi ezokuxhumana nabantu. Ingabe uyathandwa ngokwanele ku-Linkedin ?. Uma kungenjalo udinga ukusebenza kuso kanzima. Ngenxa yabaphathi abaqashisayo abadala. Ikakhulukazi kusuka esifundeni saseMpumalanga Ephakathi. Ukuhlola okuningiliziwe kuphrofayela yakho. Ngakho ungasheshi futhi uqale ukusebenzisa ama-social media ekufuneni kwakho komsebenzi.
I-LinkedIn Recruiting for jobs e Dubai
Ngenxa yemisebenzi yamahhala, ne-Linkedin. Ungajoyina amaqembu omphakathi. Lapho abaqashi bezithumela imisebenzi. Ngaphezulu kwalokho, ungakwazi ngokushesha uphathe uhlelo lokusebenza lomsebenzi. Futhi ukuthumela lokho ngokuqasha umphathi ngaphakathi kwenkampani e-Dubai. Ngenxa yokuthi i-Linkedin iyona engcono kakhulu. I Abaqashi bomsebenzi we-UAE wanquma ukuhamba kusuka ku-Facebook eya ku-Linkedin. Ngoba leli khasi libonakala lingaphezulu kochwepheshe. Okuningi okuningi amabhuku aqondiswe ngebhizinisi e-UAE.
Kule nethiwekhi yezokuxhumana, ungabamba iqhaza ezingxoxweni ezibukhoma. Uhlangothi olubi kuphela kubo. Ungenza amaphutha ngenkathi efuna umsebenzi.
Ngokuqashelwa abaphathi kanye nabasebenzi abaqashi base Dubai. Ungakwenza lokho kuphela ku-Facebook naku-Linkedin okumele ucaciswe. Ngokuqinisekile amasayithi okusesha afana nalokhu. Uzovumela wonke umuntu ofuna umsebenzi futhi izinkampani zangasese. Ukuqwashisa ngebhizinisi labo noma uhlobo lomuntu siqu. Izinkampani zizofinyelela abazongenela ukhetho. Futhi umsebenzi unikeza ngaphakathi I-Dubai City Area. Iyakhula ngenxa yabantu abafanelekile abaqhamuka ku-Linkedin. Kufanele ufake iphrofayli yakho ye-Linkedin ukuze uthole isipiliyoni esizayo emsebenzini wakho wokufuna.
Linkedin yiyona engcono kakhulu yokuqoqwa kwesikhundla semisebenzi e Dubai.
Reed.co.uk - Imisebenzi yase-UK Base e-Dubai Website
Iwebhusayithi yokusesha umsebenzi like Reed.co.uk. Ukuphatha i-database enkulu yezinkampani e-UK nase-UAE. Ngakho ungathola umsebenzi omuhle ehhotela lase-UAE. Noma ungakwazi thola amathuba okuthola amathuba eNdiya. Ngakolunye uhlangothi, uthumele ukuqhubeka kabusha kuReed. Ngokuqinisekile kuzosiza wonke umsebenzi ukuba abe yisizwe. Inkampani ayikona kuphela ukuthola umsebenzi e-Dubai izigaba zomhlahlandlela. Kodwa ikakhulukazi ungakhuthaza nabo. Umhlanga uhlinzeka abafuna umsebenzi ukuqonda okukhethwe kukho inkampani. Kuphi imisebenzi eminingi enikezwayo e Dubai? Empeleni, ungaba nenqubo yokuxoxisana. Ngomunye wabaphathi babo eHhovisi labo laseLondon.
Isibonelo, ungathola umsebenzi okhokhelwayo ophezulu kule ndawo yomsebenzi. Imiholo yenziwa ku-GBP. Futhi izinzuzo nazo zikhokhwa ngemali yaseBrithani. Ngakho uma ungathanda ukuthola phezulu. Cabanga nge reed.co.uk for the career. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kokuhlinzeka uhlu lwezemisebenzi ku Dubai ngisho nakwabesifazane abafuduka kwelinye izwe. Uhlanga kuvumela abaqashi nabaqashi e-UAE. Ukukhomba abalingani bamathuba ngaphakathi kwe-500 miles ukusuka eLondon. Nge-Reed, ungase futhi uthenge izinkampani ngqo kubantu abafuna umsebenzi.
I-Monster - i-India - UAE yeJobe Portals e-Dubai
Imisebenzi e Dubai ne Monster. Ngaphandle kwalokho, kuhle kubantu abafuna umsebenzi wase-Asia. Ngakolunye uhlangothi, isizwe sendawo asisebenzisi ukusesha okuningi kwamathambo. I-monster.com iyindawo enkulu yomsebenzi ikakhulukazi ngoba baseNingizimu Afrika abafuna umsebenzi e Dubai. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi baseNdiya nabasePakistan basebenzisa ngokunenzuzo. Le nkampani, ngokujwayelekile, idale ukudlulisela abaphathi. Le nkampani inesinye sezinombolo ezinkulu kakhulu zokufakwa ohlwini kwemisebenzi eMpumalanga Ephakathi. Ngakho, Ukuthola umsebenzi e-Dubai kuyindlela engcono kakhulu nge-Monster.
Imisebenzi engaphezulu kwe-50,000 igcwaliswe nsuku zonke. I-Monster Find Better ikuvumela futhi ukuze ulayishe okuqhubekayo kwakho. Kanye nokudala iphrofayli yakhe ku-UAE. Le nkampani ihlelwe kakhulu ngezinkampani ze-IT e-Dubai. Abafuna umsebenzi be-IT bayayithanda kuphela inkonzo. I-Monster inikeza inkonzo enhle kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, ungakha izinsizakalo zokusesha zokucinga ngaphambi kokuba uthuthele ku-UAE. Futhi ungathola izaziso zomsebenzi ezihlosiwe ezihanjiswa kwi-imeyili yakho. Eqinisweni, i-80% yezinkampani zayo e-Dubai imisebenzi ilawula umsebenzi ku-Monster.com.
I-monster e-India ifuna ukuqashelwa imisebenzi e Dubai.
I-SimplyHired - Injini Yokusesha Yobuphezulu Ephezulu e-Dubai
Ngaphezu kwalokho, i-website ye-Simply Hired career. Iphakathi kweyodwa yezinjini zokusesha ezinhle kakhulu e-US nase-UAE. Ungakwazi ngisho nokufuna umsebenzi wokubloga nabo. Ngokwethembeka konke, inkampani inikeza isevisi ye-imeyili yokuxwayisa. Futhi uvumele a abazingeli bemisebenzi londoloza usesho lomsebenzi nsuku zonke. Ngakho ungagcina lokho engqondweni ngezidingo zesikhathi esizayo. Isibonelo, ukhetho olusha olunolwazi lwe-MBA lungalusebenzisa leli khasi futhi kufanele lusebenze kahle. Ngisho nakho abafuna umsebenzi manje bangathola futhi umsebenzi. Hlunga usesho lwemisebenzi ukugxila ezinkampanini eziningana. Ukuthi unesithakazelo sokusebenza kuwo. SimplyHired ukuqasha abaphezulu abavotelwe. Baqhubeka beqoqa inthanethi. I-Simply Hired nayo inezinga eliphakeme lokuhlukahluka abazingeli bemisebenzi e-UAE.
Dubai City Company Ukuqasha imisebenzi e Dubai.
Ukugqugquzelwa kuze kube sekupheleni kwabafuna umsebenzi
So uma ufuna umsebenzi omusha. Kukhona izinketho ezinkulu emhlabeni jikelele wokuqasha. Noma kunjalo, ngeke ukwazi ukuthumela i-CV yakho kuwo wonke amakhasi. Inkampani yethu ihlale isinqumo esifanele uma ungathanda ukwandisa usesho lwakho lomsebenzi. Ungalokothi ulahlekelwe futhi usebenze nsuku zonke. Finyelela imigomo yakho yomsebenzi futhi uhambe ngokushesha. Inhlanhla ngokusesha kwakho umsebenzi. Futhi, bheka amanye amazwe eGulf. Isibonelo, unga qala ukufuna imisebenzi eSaudi Arabia.
Singabantu Ukuqasha imisebenzi e Dubai